Ndishiya Umsebenzi oMkhulu ndisiya kwiMithombo yeendaba yeNtlalo | Martech Zone
Ndishiya Umsebenzi oMkhulu kwaye ndisingise kumajelo eendaba
NgoMgqibelo, Oktobha 4, 2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Unyaka wokugqibela endikhe ndachitha nawo Indawo yokuphumla ibe kukukhwela okungathethekiyo kwe-roller coaster. Inkampani ikhula ngokukhawuleza okukhulu kwaye iphumelele kakhulu!
Siphumelele I-Techpoint Mira ibhaso.
Silugqibile uphuhliso lwe-4 POS indibaniselwano-iMicros, iPOSitouch, iComtrex kunye neAloha.
Siye saqulunqa kwakhona ujongano lomsebenzisi ukuze sandise ukuguqulwa kwabaxhasi bethu. Songeze ukungafuneki kunye neempawu zokhuseleko kwisicelo.
Side saphosa kwindawo yokutyela Indawo yeetyunithi zethu ezininzi.
NgoLwesihlanu ibilusuku lwam lokugqibela nge Indawo yokuphumla. Kwakunzima ukushiya inkampani ndaphalaza intliziyo yam kunye nomphefumlo wam kwaye inenkxaso yemali yezona zininzi yimpumelelo Internet iinkampani in Indianapolis.
Andithandabuzi ukuba ndiyishiye le nkampani ikwimo entle. Eyona nto ndiyikhathazayo kukuba ingaba abatyali zimali balungile na ngokuhamba. Esona sizathu siphambili sokuba ndaye ndaya ePatronpath yayikukukwazi iqela labo lotyalo-mali - elenziwa ngoosomashishini ababalaseleyo be-Intanethi kulo mmandla. Into yokugqibela endifuna ukuyenza kukushiya emva kwempumelelo engaka. Ndiza kuqhubeka ndicebisa kwaye ndincedise iPatronpath ngalo lonke ixesha bendifuna, ukuqinisekisa ukuba ukuhamba kwam akuchaphazeli impumelelo yabo.
Ukukhula kunye neziphumo ngokuqinisekileyo yayizezona zibalulekileyo ePatronpath. Ndandinethuba lokusebenza nabantu abangakholelekiyo. Sisebenze imimangaliso kunyaka ophelileyo sinezixhobo ezimbalwa. Ndinebhongo ngento esiyiphumezileyo.
Ukusebenza nabantu abakudidi lwehlabathi
Kwiinyanga ezi-6 ezidlulileyo okanye kunjalo, bendonwabile ukusebenza noMarty Bird - umntu endandimazi kwasekuqaleni kwam NgqoThagethi kodwa khange ndibenalo ithuba lokusebenza ngqo. UMarty uyintengiso entle kakhulu enesakhono sokwakha iinkqubo zentengiso ezikumgangatho wehlabathi ukususela ekuqaleni.
UMarty ungene ePatronpath ukuya kuthatha inkqubo entsha yesizwe esayisayinele iqumrhu leebhiliyoni ezininzi. Kwisithuba seentsuku ezi-2, wayithatha le projekthi. Kwisithuba seeveki ezimbalwa, wakha inkqubo kunye nenkqubo ejikeleze iprojekthi. Ngoku le nkqubo iyaqhubeka ukukhula kwaye ikhula phantsi kobunkokheli bakhe. Onjani wona ukuba mkhulu umntu! Inyaniso encinci eyaziwayo, uMarty ikwangumatshini oqeqeshiweyo one- uthando lwe-Audi TT.
Elinye iqela lalilungile nalo. UMark Gallo kunye noChad Hankinson babesoyikeka ekusebenzeni bobabini nangobungcali. Bobabini bangamaKristu amakhulu andincedileyo ukundicebisa kwezinye iingxaki. Ndinetyala kubo bobabini. Kananjalo baneqela loLawulo lweAkhawunti abangamagorha abazinikeleyo ekuncedeni abathengi babo baphumelele. Ndaye ndasebenza noTammy Heath uninzi lonyaka kwaye wayemangalisa, esenza uninzi lwabathengi iyure nganye kwaye esakwazi ukuvelisa.
Kwicala elinzima kulo nyaka ibiyimfuno zomsebenzi kunye nendlela eyitsale ngayo ingqalelo yam epheleleyo. Le bhlog yahlupheka njengoko ndanako ukujongana neyam Pet iiprojekthi. Ukuba semnxebeni kwanditsalela kude kwimisitho yenethiwekhi yengingqi, nayo. Amaxesha anqabileyo endibonisileyo, abantu babothukile!
Ukuqhuba ukusuka kwicala elingasemantla e-Indy yinto endandiyithanda ekuqaleni, kodwa njengoko amaxabiso egesi enyuka kwaye intombi yam ifuna ukuba ndibuyele ekhaya ngaphezulu, iiyure ezimbalwa ngosuku endleleni zaqala ukwenzakalisa. Ndiyabulela unyana wam - ngelixa ujongisa umthwalo opheleleyo e IUPUI Kunye nokufundisa ngasese nakwiZiko loNcedo lweMathematika, usafumana ixesha lokuthatha uKatie ukuya nokubuya kwimisitho aze amfumane ukutya. Ndiyabulela abantwana bam abakhohlakeleyo!
Isihloko kwiCompendium Blogware
Ke… xa uChris Baggott ebiza evela Isiqulatho seBlogware Ndathi kunokubakho ithuba lokusebenza nabo, bendonwabile! Isishwankathelo Qalile Ndikunye noChris kwaye sisebenza ngeempelaveki ukubuya ngo-2006.
Ndihleli ne ExactTarget kwaza kwafika u-Ali Sales. Ubunkokeli buka-Ali nothando lukaChris luyinyanzele inkampani ukuba ibe yinto engakholelekiyo Iqonga leBlog Blog. Ndigcinile ubudlelwane obusondeleyo nenkampani kulo nyaka uphelileyo kwaye ndashumayela ngeqonga. Sizise inkampani yamagqwetha uBose McKinney malunga nenyanga ephelileyo kwaye sele bethethile.
NgoMvulo, ndithatha imisebenzi njenge Usekela Mongameli weBlogging Evangelism kwiNkcazo. Ndiza kunika ingxelo ku-Ali ndize ndincedise onke amaqela ethu kunye nabaxhasi ukuba bafundise, bashumayele, basebenzise izinto ezenzekelayo, badibanise, njl. iinzame zentengiso. Eso sisikhundla esinzima ukwala ukunika umsebenzi wam kule minyaka imbalwa idlulileyo. Ndiza kuphinda ndisebenze phantsi kwesangqa e-Indy kwakhona, ke ndiqinisekile ukuba ndiza kudibana noogxa bam abadala!
Ukucinga ukuba konke kwaqala ngoPat Coyle kwaye Ndifunda Incoko ezihamba ze iminyaka embalwa edlulileyo iyamangalisa.
Ngale nto, ndifanele ukubulela URobert Scoble kwaye UShell uSirayeli ngokubhala incwadi eyandikhuthazayo ukuba ndiqale eyam ibhlog kwaye nditshintshe indlela endifuna ukuyithatha kwihlabathi lokuthengisa! Ukuba ndicinga isikhundla kwiSocial Media ngexesha lolunye uqoqosho olubi kakhulu kwimbali yelizwe lithetha ngokubanzi kumandla esi sixhobo, akunjalo?
Uhlalutyo lweNtengiso 101: Ndibonise iMali!
Izithuba ezili-1,500! Ukuya kuLawulo lweendaba zeNtlalo!
Oktobha 4, 2008 ngo-5: 10 PM
Ndiyakuvuyela iDoug! Jonga phambili ukuva konke malunga nomsebenzi omtsha!
Eyona ilunge kakhulu ngaphesheya kwechibi,
Oktobha 4, 2008 ngo-5: 13 PM
Ziindaba ezimnandi ezo uMnu VP, mhlekazi, ukuphakama kwakho!
Isantya kuwe kunye nosapho lwakho.
Ngekhe kwenzeka kumfana olungileyo!
Oktobha 4, 2008 ngo-5: 31 PM
Iindaba ezimnandi, Doug! Kwakumnandi ukufunda iinkcukacha kunye nembali emva kwesigqibo sakho.
Oktobha 4, 2008 ngo-5: 33 PM
Ndiyakuvuyela uDoug. Iindaba ezimnandi ngokwenene kwaye enkosi ngokwabelana ngebali lakho.
Oktobha 4, 2008 ngo-5: 49 PM
Wamkelekile kwimidiya yoluntu! Ndoda, NDIYAYITHANDA nam !! Ndiyatya, ndiyaphefumla kwaye ndilala lento !! Okona kulungileyo kuwe !!
Oktobha 4, 2008 ngo-6: 08 PM
Sigcine sithunyelwe kwimpumelelo yakho! Ndonwabile ukubona into oza kuyizisa kwinkampani esele imangalisa kangaka!
Oktobha 4, 2008 ngo-6: 23 PM
UDoug - wow! enkosi ngamagama amnandi. Italente yakho, uthando kunye nomdlandla uya kukunceda kakuhle kwisigcini-sivuyisane. Igalelo lakho elibalulekileyo kwiPatronpath lenze isiseko esiza kuqhubeka nokwakha kuso. Ndiyabukhumbula ubukho bakho eofisini, isimilo sakho esithobekileyo, ukuthanda kwakho umculo (!) Kunye nokuhleka okuvuyisayo. Ukukulandela kwi-Twitter ngekhe kubuyise ezo ngxoxo zimnandi zeyure sasemini esinazo! Khathalela uDoug.
Okt 5, 2008 ngexesha 1:07 AM
WOWU!! Kuyamangalisa oko! Ndiyazi ukuba uyakuqhuba kakuhle – ngumnqweno wakho!
Okt 5, 2008 ngexesha 7:26 AM
Isivumelwano esihle Doug!
Ndiyakhumbula ukhankanya kum ukuzibandakanya kwakho neCompendium kwaye ndicinga ukuba iya kuba liqonga elihle kuwe!
Kuhle ukuva ukuba ekugqibeleni kuzaliseka!
Okt 5, 2008 ngexesha 9:58 AM
Kuvakala ngathi kukufanelekile. Ndiwonwabele umsebenzi owenzayo ngexesha lakho elongezelelekileyo kule bhlog. Kuya kuba mnandi ukubona ukuba kunjani xa unayo yonke ingqalelo yakho.
Oktobha 5, 2008 ngo-6: 13 PM
Uya kwenza into entle kwiCompendium!
Okt 6, 2008 ngexesha 12:28 AM
Ndikunqwenelela okuhle, Doug. Ndiqinisekile uyakwenza kakuhle ngegig entsha kwaye ndiyasithanda isihloko esitsha! (Ibamba into osele uyenza.)
Okt 6, 2008 ngexesha 5:08 AM
Wenze kakuhle, Doug!
Oktobha 7, 2008 ngo-2: 59 PM
Sivuyisana noDoug, ndibone nje iindaba namhlanje! Elona thamsanqa kwindima yakho entsha, kuvakala ngathi wena kunye nesiGqibo sikulungele ngokufanelekileyo
Meyi 30, 2011 kwi-8: 15 AM
WOWU!! Kuyamangalisa! Uya kwenza into entle kwiCompendium!